Home ၊အညာနွေတမာမြေ: သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းချက် ( အောင်သာနီ)
သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းချက် ( အောင်သာနီ)
Posted by အညာနွေတမာမြေ anyarnwaytamarmyay at 11:42:00 AM
လူဝင်မူ. ကြီးကြပ်ရေးက လဒ်စားနေသရွှေ.
ဒီဘင်္ဂလီလူမျိူးတွေက မြန်မာပြည်ကို ၀င်နေအုံးမှာပဲ
Oct 16, 2011, 1:01:00 PM
I am the one who is pointing the truth. We have some Muslims from Mrauk Oo, Sittway and Yangon who oppose the falsehoods. You have to adjustalittle bit that not all Muslims claim Rohingya. You should not put about religious hatred.
I also blame Dr Waker Udin that he should not have said "U Tin Oo has to apologize". He must have adjusted what he will say. He was wrong totally. These Muslims they have prejudice of Islam or prejudice of monopolization.
According to history, there were Muslims in Mrauk Oo as you already mentioned Rakhine-Muslims descents and Caman. ရခိုင်မျိုးနွယ်စု နှင့် ကမာန်.
ဒေါက်တာ ဝေါကာဝုဒိန် အနေနဲ့ ဦးတင်ဦး အပြောမှားသွားလို့ တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို လုံးဝမပြောသင့်ပါဘူး။ ပညာတတ်ဆိုဒါ မွတ်စလင်မ်ထဲမှာ ခေါင်းခေါက်ရေတွက်နိုင်အောင်သာ ရှိဒါပါ။ မြန်မာပြည်ဖွား တခြားဘာသာဝင်တွေထဲမှာ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူပြီး ပြောလို့မရဘူး။ နောက်တစ်ခုက ပညာဘယ်လောက်တတ်တတ် အမှန်တရားကို မမြင်တတ်ရင် ပညာမဲ့ထက် နိမ့်ကျတယ်ဗျ။
Oct 17, 2011, 3:10:00 PM
If you read the article here, you will understand.....
Oct 17, 2011, 4:01:00 PM